Jurgen Klopp oo talaabo u jira inuu rikoodh taariikhi ah ka sameeyo kulanka Everton – Gool FM
(Liverpool) 20 Juun 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa talaabo u jira inuu rikoodh taariikhi ah ka sameeyo kulanka habeen dambe ee Everton, kaasoo qeyb ka ah kulamada 30-aad ee horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa u baahan kaliya inay ka hesho 6 dhibcood kulamada soo socda, si loogu caleemo saaro si rasmi ah hanashada Premier League, kaddib muddo 30 oo aysan ku guuleysan.
Haddaba kulanka habeen dambe ee Merseyside derby ayaa noqon doona kulankii 11-aad uu Jürgen Klopp ka hor tago kooxda Everton, wuxuuna macalinka reer Germany isku dayi doonaa inuu sii wato taxanihiisa cajiibka ah ee guuldarro la’aanta uu ka heysto naadiga ay dariska yihiin.
Haddii Jürgen Klopp uu kulankan ka fogaado wax guuldarro ah, wuxuu gali doonaa taariikhda, wuxuuna noqon doonaa macalinkii ugu horeeyay ee kooxda Liverpool ah oo aan guuldarro la kulmin 11-kiisii kulan ee ugu horeeyay uu ka hor yimid Everton.
Klopp ayaa ilaa iyo hadda ciyaaray 10 kulan oo Merseyside derby ah isagoo aan la kulmin wax guuldarro ah, wuxuuna rikoodhkan kala mid noqday halyeeyga Bob Paisley kaasoo ciyaaray 10 kulan derby ah, kahor inta uusan guuldarreysanin kulankiisii 11-aad, kaasoo looga adkaatay 1-0 bishii October 1987.